बोनस र हकप्रद वितरण गर्दा बजार मुल्य कसरी समायोजन हुन्छ ? - Laltin.com
बोनस र हकप्रद वितरण गर्दा बजार मुल्य कसरी समायोजन हुन्छ ?
आर्थिक बर्ष सकिय सँगै बिभिन्न कम्पनीले आफ्नो नाफा नेक्सानको विवरण सार्बजनिक गरी सकेका छ्न्‌ । बितरण गर्न सक्ने नाफाको आधारमा कतिपय कम्पनीले लगानिकर्तालाई लाभांश घोषणा गरी साधारणसभा मिति तोकिसकेका छ्न्‌ । ९ वटा बैंक , २ विकास बैंक, १८ लघुवित्त ,९ हाइड्रोले, २ उत्पादन , १ लगानी र २० म्युचल फंन्डले लाभांश घोषणा गरी सकेका छ्न्‌ । कतिपयले साधारणसभा गरीसके भने कुनैले साधारणसभा मिति तोकेका छन भने कुनैले मिति तोक्न बाँकी छ ।
लाभांश दुई किसिमका हुन्छन् एउटा बोनस र अर्को नगद लाभांश
बोनस शेयर भन्नाले कम्पनीले आफ्ना लगानिकर्तालाई लाभांशको रुपमा आफ्नै कम्पनीको शेयर बितरण गर्नु हो । यसो गर्दा कम्पनीले सो बितरण गरेको रकम आफ्नो पूँजी बढाउन प्रयोग गर्दछ भने लगानिकर्ताको शेयर संख्या बढ्छ । नेपालमा धेरै जसो लगानिकर्ता बोनस शेयर प्रति आकर्षित देखिन्छन् तर कम्पनीले बोनस बितरण गर्दा त्यसको मुल्य समायोजन हुने गर्छ । उदाहरणका लागि –
मानौ आई.डी कम्पनी लि. नेप्सेमा लिस्टेड छ उक्त कम्पनीले आफ्नो शेयर धनिलाई ३०% बोनस शेयर बितरण गर्ने निर्णय गर्छ र बुक क्लोज मिति माघ २० गते तोक्छ । यदी कम्पनीको बजार मुल्य माघ १९ गते २१५० छ भने माघ २० गते आई.डी कम्पनी लि को बजार मुल्य १६५३.८४ हुनेछ । यदि तपाईले १०० कित्ता २१५० का दरले २१५,००० मा किन्नु भयो भने बोनस सहित तपाईको १३० कित्ता हुनेछ जुन १६५३.८४*१३० = २१५,००० हुन आउछ ।
नगद लाभांश भन्नाले कम्पनीले आफ्ना लगानीकर्तालाई लाभांशको रुपमा नगद बितरण गर्नु हो । नगद लाभांशले कम्पनीको पूँजी बढाउदैन र नगद वितरण गर्दा मुल्य समायोज पनि हुदैन । यदि कम्पनीको बजार मुल्यको १०% ले हुन आउने दर भन्दा बढी नगद दिएको छ भने , बोनस वितरण गर्दा गर्ने बिधि बाट मुल्य समायोजन गरिन्छ ।
उदाहरणका लागी आई.डी कम्पनी लि को बजार मुल्य २५० छ र उक्त कम्पनीले ३०% नगद वितरण गर्छ भने मुल्य समायोजन गर्नु पर्छ । २५० को १०% २५ हुन्छ र कम्पनीले ३०% लाभांश वितरण गरेको छ जुन १०% भन्दा धेरै हो । सामान्यतय नगद बितरण गर्दा मुल्य समायोजन हुदैन ।तपाई सँग १००० कित्ता आई.डी कम्पनी लि को शेयर छ र उक्त कम्पनिले ३०% नगद लाभांश वितरण गरेको छ भने तपाईले १०००*३० = रु ३०,००० (कर सहित) नगद पाउनु हुनेछ ।
हकप्रद शेयर कम्पनीले आफ्नो पूँजी बढाउन लगानिकर्ता बाट रकम उठाउने गर्छ। लगानिकर्ताले आफ्नो शेयर सङख्याको आधारमा हकप्रद शेयर भर्न पाउछन । सो शेयर भर्न लगानिकर्ताले बुक क्लोज मिति भन्दा अगाडीनै शेयर किनी सकेको हुनु पर्छ । यदी कम्पनीले १:१ का दरले शेयर निस्कासन गर्‍यो भने तपाईसँग यदी १० कित्ता शेयर छ भने १० कित्ता शेयर फेस भ्यालु मै किन्न सक्नु हुनेछ । नेपालमा १०० रुपैया फेस भ्यालु मानिन्छ ।
हकप्रद शेयर को पनि मुल्य समायोजन हुन्छ ।
उदाहरणका लागी आई.डी कम्पनी लि को बुक क्लोज भन्दा एक दिन अघि बजार मुल्य २००० छ र उक्त कम्पनीले १००% हकप्रद शेयर वितरण गर्छ भने मुल्य समायोजन गर्दा १०५० हुन आउछ ।
Previous: बडादसैँको मुख्य दिन आज विजयादशमी, टीका थाप्ने प्रभावशाली समय बिहान १०ः०२ बजे
Next: गुल्मीमा जिप दुर्घटनामा तीनको मृत्यु